गण्डकी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्ने – Sulsule
सुलसुले २०७७ असोज १३ गते १७:०४ मा प्रकाशित
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने भएको छ ।साविक भरतपोखरी गाविस हाल पोखरा महानगरपालिका– ३३ को पशुपतिघाटको १७४ रोपनी जमिन गतवर्ष नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकारका लागि प्राप्त भएपछि सरकारले सो जमिनमा रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको राससले जनाएको छ।
सरकारले गत वर्ष रङ्गशालाको डिपिआरका लागि रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जमिन प्राप्त भएपछि सरकारले डिपिआर प्रक्रिया शुरु गरेकामा कम्पनीले हालै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो डिपिआरमा रङ्गशाला निर्माणमा रु. एक अर्ब ६० करोड लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका खेलकूद विभाग महाशाखाका उपसचिव तेजप्रसाद काफ्लेले बताए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा क्रिकेट रङ्गशालाका लागि रु. दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटबाट यस वर्र्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जमिन सीमाङ्कन तथा तटबन्धनलगायत काम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपसचिव काफ्लेले भने, “अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसवर्ष बजेट थोरै मात्र विनियोजन गरिएकाले जग्गाको संरक्षणका काम गर्दै रङ्गशालाका लागि स्रोत जुटाउन शुरु गर्दछौँ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएपछि सरकारको आव २०७४÷७५ को पहिलो बजेट तथा कार्र्यक्रममा प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थान पहिचान गर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछिका बजेट कार्यक्रममासमेत सरकारले रङ्गशाला निर्माणलार्ई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
करिब १२३ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा निर्माण गरिने रङ्गशालामा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट बन्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । मैदानमा सात वटा पिच, भिभिआइपी कक्ष, भिआइपी कक्ष, खेलाडी कक्ष(प्लेयर बक्स), चेञ्जिङ रुम(कपडा फेर्ने कोठा), मिडिया कक्ष, पार्किङलगायत संरचना बन्नेछन् ।क्रिक्रेट रङ्गशाला पोखराको मुख्य बजारदेखि १० किमी टाढा र पृथ्वीराजमार्गबाट दुई किमिको दूरीमा रहेको छ । पोखरामा पछिल्ला वर्षमा क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितासमेत सम्पन्न भएका छन् ।
पोखरा रङ्गशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानमा गतवर्ष १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद९साग०को महिला क्रिकेट खेलाइएको थियो । सो मैदानमा क्रिकेटका अन्य पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । पोखरा प्रिमियर लिग९पिपिएल०का दुई संस्करणसमेत सोही मैदानमा सम्पन्न भएका थिए ।प्रदेश सरकारले बनाउन प्रक्रिया शुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणपछि पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि दुई मैदान अनिवार्य गरिएको छ ।
क्रिकेट खेलमा अनलाइनमार्फत सट्टाबाजी खेल खेलाएको अभियोगमा ३ जना पक्राउ